Hoteelka New W wuxuu leeyahay waxaad ku qaadataa Centerstage RUNWAY, Iftiimiso Magaalada oo ku soco dusha Dayaxa, kaliya Changsha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Hoteelka New W wuxuu leeyahay waxaad ku qaadataa Centerstage RUNWAY, Iftiimiso Magaalada oo ku soco dusha Dayaxa, kaliya Changsha
Wararka Shiinaha • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News
"W Changsha wuxuu astaan ​​u yahay hudheelka W ee siddeedaad ee laga furi doono Shiinaha, oo ah mid ka mid ah suuqyada ugu saamaynta badan socdaalka iyo ganacsiga labadaba, waana ku faraxsanahay inaan W Hotels keeno meelo badan oo dalka oo dhan ah," ayuu yiri Tom Jarrold, Hoggaamiyaha Brand Global, W Huteelada Aduunka. "Magaalooyinka sida Changsha, oo leh degganeyaashooda mustaqbalka diiradda saaraya iyo suuqyada raaxada ee kun-sannadka ah oo si xawli ah u koraya kuwaas oo damca kuwa cusub oo aan la filayn, ayaa ah garoonnada fursadaha aan xad lahayn ee W."
Mustaqbalka hoteellada ayaa hadda furmay.
W Hotels Worldwide ayaa lagu wadaa inay iftiimiso caasimadda iyo magaalada ugu weyn gobolka Hunan, Shiinaha, iyadoo maanta la furayo W Changsha.
Huteelka oo leh Hunan Yunda Industry Group, W Changsha, huteelku wuxuu ka tarjumayaa niyadda dhalaalaysa ee magaalada mustaqbal iyo dhinacyo badan leh oo leh naqshad daandaansi iyo ciyaar leh oo lagu dhiirrigeliyay safarka hawada.
Si sahal ah ayaa loo heli karaa, W Changsha waxay 30 daqiiqo u jirtaa gegida dayaaradaha ee Changsha Huanghua, oo 15 daqiiqo u jirta Saldhigga Tareenka ee Koonfurta Changsha, waxayna toos ugu xireysaa Waddada weyn ee Beijing-Hong Kong-Macau. Naqshadeeyay Cheng Chung Design (HK) Ltd, W Changsha waxay qaadataa khataro mala -awaal leh oo ku dhiirranaya foomamka naqshadda cusub ee u dabbaaldegaya dhaxalka hodanka ah ee Changsha iyo casriyeynta. Shiinaha dhexdiisa, Changsha waxaa sidoo kale loo yaqaan “Star City” magaceeduna wuxuu dhiirrigelinayaa sheekada naqshadda hudheelka oo leh qaabab joomatari oo geesinimo leh oo lagu daray farshaxanka avant-garde ee casriga ah. Waxaa si gaar ah u xilsaaray hudheelka, farshaxanka xiisaha leh sida taxanaha bisadda Schrodinger iyo rakibaadda farshaxanka Zeta waxay sahamiyaan qarsoodiga koonkan iyada oo loo marayo muraayadda W, iyagoo abuuraya kulan aan la filayn hoteelka oo dhan.
Markay yimaadaan W Changsha, martida waxaa soo dhaweynaya astaanta W, oo iftiimisay inay u ekaato dusha dayaxa. “Avenue of the Stars,” oo ah muuqaal warbaahin isku dhafan oo isku daraya digital, interactive, iyo farshaxanka dhawaaqa, ayaa u qaada martida RUNWAY, baarka loo socdo ee Qolka fadhiga, saxeexa astaanta, isbadal bulsheed oo ka socda hudheelka hudheelka dhaqanka. Halkan, farshaxanka "Man Pepper Man" wuxuu ku martiqaadayaa martida inay kor u eegaan oo ay la yaabban yihiin yaababka bannaan ee ku jira macnaha iyo dhaqanka Changsha ee maxalliga ah.
Imaanshaha W Changsha, Qolka fadhiga, RUNWAY
345 qolalka martida ee hudheelka iyo suuliyadu waxay bixiyaan raaxo casri ah iyo raaxo-tiknoolajiyad cusub, oo leh gidaarro muujinaya meerayaasha, xiddigo, iyo helidda nebulae-ka iyada oo loo marayo “qol indhaha meow” shaashadda LED-ka oo ku dayashada sahaminta bannaan. Laga bilaabo 26th dabaqa ilaa dabaqa ugu sarreeya 28th, Sheekada saddex-geesoodka ah ee aadka u ba'an-WOW Suite (astaanta ayaa ku jirta suugaanta madaxweynaha) waxaa ku jira in ka badan 1,000 mitir oo laba jibbaaran oo ah meel lagu noolaado iyo waqti firaaqo ah, oo ay ku jiraan beer gaar loo leeyahay iyo barkadda dabaasha, si loogu sameeyo goob aad u qurux badan oo loogu talagalay dhacdooyinka khaaska ah adeegga saxiixa huteelka.
W Changsha wuxuu ballanqaadayaa inuu noqdo meesha ugu cusub ee ay ka cunaan cunnooyinka maxalliga ah oo leh saddex makhaayadood iyo baarka loo socdo. TROPICS, oo ah hudheelka hudheelka maalintii oo dhan, ayaa bixiya waayo-aragnimo dhex-dhexaad ah oo leh jikada fikradda furan oo bixisa cunnada gudaha iyo kuwa caalamiga ah. SHINN YEN waxay u dabbaaldegtaa dhaqanka Changsha iyada oo loo marayo cuntada iyo farshaxanka, iyada oo si xamaasad leh loogu dhaqo cunnada Hunanese ee maxalliga ah oo soo bandhigaysa dhadhanka basbaaska ee gobolka. Fiid kasta, bandhig cabaret ah oo xiisa leh oo dib loogu soo daray Huna opera dhaqameedka ayaa sii kicisa waayo -aragnimada cuntada. Habeenkii, RUNWAY waa baarka hudheelka loo aado halkaas oo dhammaan martidu ay maraan masraxa dhexe si ay u arkaan oo loo arko. Barku wuxuu ku iftiimiyaa bandhigyo muusig oo koronto leh oo si fiican ugu lamaansan is biirsaday gacmeed iyo qaniinyo fudud.
Dhacdooyinku waxay iftiimayaan W Changsha
Iyada oo leh in ka badan 1,000 mitir oo laba jibbaaran oo goob shaqo ah oo ku baahsan shan qol oo dabacsan, W Changsha waxay bixisaa fursado aan xad lahayn oo loogu talagalay martigelinta shaqada iyo isu imaatinnada bulshada labadaba. Dabaqa dhexdiisa, sawir -gacmeedka iyo farshaxanka farshaxanka “Fist Bump” - muujinta caalamiga ah ee salaanta saaxiibtinimo - ayaa sugaysa martida markay kulmaan kahor munaasabad xamaasad leh. Qol kasta oo lagu kulmo waa mid hawlo badan leh oo lagu qalabeeyay tiknoolojiyadda maqalka ee ugu dambeysay oo loo habeeyay shuruudaha dhacdada gaarka ah. Inta u dhaxaysa shirarka, martidu waxay ku qaadan karaan nasasho W Recess, hudheelka asalkiisu wuxuu qaataa nasasho qaxwe leh cabitaan kala duwan iyo xulasho cunto oo loogu talagalay inay sare u qaaddo dhacdo kasta.
QAADASHO. RETOX. KU SOO CELI.
Shaqada ama ciyaarta ka dib, martidu waxay dib ugu laaban karaan barkadda milicsiga ama waxay ku soo xoqan karaan WET®, barkad ballaadhan oo leh saddex mitir oo ah 'Space Cat'. 24/7, xarunta jimicsiga FIT oo si buuxda u qalabeysan ayaa bixisa culeysyo iyo kaaryo iyo sidoo kale fasallo qoob-ka-ciyaar oo wadne-garaac ah si ay u gubaan kalooriyeyaasha ka hor intaan dabaal-deggu mar kale bilaaban. Martida ku nool falsafadda astaanta 'Detox.Retox.Repeat', AWAY SPA waxay sugaysaa inay soo celiso oo soo noolayso iftiimintooda.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan bilowno sumcadda W Hotels ee ku taal bartamaha Shiinaha oo aan u calaamadineyno tallaabo kale oo astaan ​​u ah annagoo sii wadna ballaarinta alaabadayada raaxada ee suuqyada cusub ee dalka oo dhan," ayuu yiri Henry Lee, Madaxweynaha, Greater China, Marriott International. "Iyada oo socdaalka gudaha uu sii socdo si uu u helo dardar aad u weyn, waxaan u keeneynaa magacyo cusub oo xiiso leh sida W meelaha dalxiiska ee soo ifbaxaya ee dalka."
Wixii macluumaad dheeraad ah ama si aad boos u qabsato, booqo wchangsha.com.